कसरी बने लिबियामा ५ नेपाली बन्धक ? उद्धारको लागि परराष्ट्रमा उजुरी – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
कसरी बने लिबियामा ५ नेपाली बन्धक ? उद्धारको लागि परराष्ट्रमा उजुरी
काठमाडौं । लिबियाको मिस्रटमा ५ नेपालीलाई बन्धक बनाएर राखिएको भन्दै उद्धारको अपील गर्दै परिवारजनले परराष्ट्रमा उजुरी दिएका छन् ।
पीडितहरुले त्यहाँका स्थानीय गुन्डा समूहले बन्धक बनाएको भन्दै भिडियो बनाएर परिवारसामू पठाएका छन् । भिडियोमा उनीहरुले आफूहरुलाई बन्दुक तेस्र्याएर मार्ने धम्की समेत दिने गरेको जनाएका छन् ।
कसरी बन्धक बन्न पुगे लिबियामा ?
मानव तस्करहरुले लिबियालाई युरोप र अमेरिका लैजाने मुख्य ट्रान्जिटको रुपमा प्रयोग गर्दै आईरहेका छन् । उनीहरु पनि त्यसैको शिकार बन्न पुगे र इटाली लैजाने भन्दै उनीहरुलाई लिबिया पु¥याइयो ।
पोखरा–१९, कास्कीका जितकाजी गुरुङले काठमाडौंका सन्तोष पराजुलीसँग मिलेर चार महिनाअघि दुबई हुँदै लिबिया पठाएका थिए । जितकाजीले इटालीमा फुपूले राम्रो काम लगाइदिने विश्वास दिलाई झन्डै ५१ लाख रुपैयाँ असुलेको पीडित परिवार सदस्यले बताए । जब उनीहरु बन्धक भएको थाहा पाए पछि भिडियो बनाएर नेपाल पठाए ।
एक मिनेटको भिडियोमा उनीहरूले कोठामा १४ पाकिस्तानीसमेत रहेको जनाएका छन् । ‘हामीलाई कोही नभएको एउटा कोठामा बन्धक बनाएर राखेका छन् । बेला–बेला सानो भाँडामा दाल र चामल मिसाएर खाना खान दिने गरेको छ । सबैले त्यही भाँडाबाट हातले झिकेर खानुपर्छ,’ भिडियोमा भनिएको छ, ‘यहाँ को–को माफिया छन् । थाहा छैन । कुट्ने, पिट्ने गर्छ । समय–समयमा बन्दुक तेस्र्याएर मारिदिन्छु भन्दै धम्की दिन्छ ।’
लिबियाली दूतावासले भने नेपालीलाई थुनेर राख्ने एजेन्ट वा नेपाली नागरिकको फोन नम्बर उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । ‘उनीहरूसँग सिधा सम्पर्क हुन सकेको छैन,’ उनले भने । दूतावासले तीन दिनअघि मात्रै लिबियामा अलपत्र परेका चितवनका दिनेश अधिकारी र गोरखाका मानबहादुर गुरुङलाई उद्धार गरेको थियो । उनीहरू युरोप छिर्न भनी लिबिया पुगेका थिए । उनीहरूको लिबिया बसाइ अवैध भएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।